भोटे भन्दै सामाजिक संजालमा भएको पोस्ट बारे दूतावास र नेफिन कोरियाको ध्यानाकर्षण, कोरियनहरु कसरी भोटे भए ? - Fonij Korea
लेखक: बिमल सिं लामा | प्रकाशीत मिति: September 4, 2020
केही दिन देखि दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरु बीच सामाजिक संजालमा भैरहेको विवाद बारे नेपाली दुतावास सउल र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दक्षिण कोरियाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
केही समय अघि केही ब्यक्तिहरुले “भोटे” शब्द प्रयोग गर्दै कोरियनलाई होच्याउने खालको स्ट्याटस लेखेको थियो । यसरी भोटे शब्द प्रयोग नगर्न आदिवासी तथा जनजाती अभियानताहरुले अनुरोध गर्दा उल्टै तथानाम गाली गलौज गर्न थालेपछि विवाद जन बढ्न थालेको थियो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली दुतावास सउलले र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दक्षिण कोरियाले बिहिवार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत त्यसो नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको हो ।
नेपाली दूतावासको विज्ञप्ति
आदिवासी जनजाति महासंघ दक्षिण कोरियाको विज्ञप्ति
उक्त क्रियाकलापमा लागेकाहरुलाई संयमित हुन र जातीयरुपमा मानमर्दन गराउने नियतले कुनै किसिमको अपशब्द प्रयोग नगर्न र लेखी सकेका पोस्टहरुलाई डिलिट गरी उच्च मानवीय मूल्य मान्यता प्रदर्शन गर्न नेपाली राजदूतावास सिओल र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दक्षिण कोरियाले आग्रह गरेको छ ।
कोरियनहरु कसरी भोटे भए ?
भोट तिब्बतको पुरानो नाम हो । कुनै बेला भोट अर्थात तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा अस्तित्वमा थियो । तर अहिले चिनको स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमा तिब्बतसँग जोडिएको छ । तिब्बत पनि हिमाली भेग हो । धेरै पहिले देखि तिब्बत र नेपाल बिचको राम्रो ब्यापार सम्बन्ध रहेको ऐतिहासिक तथ्यहरुले बताउँछ । तत्कालीन समयमा केही नेपालीहरु तिब्बतमा नै गएर ब्यापार गर्ने गर्थे भने तिब्बतीहरु पनि नेपाल आएर ब्यापार गर्ने गर्थे । यसरी नेपाल आएको तिब्बती ब्यापारीहरुलाई भोटे भनेर सम्बोधन गर्न थालेको देखिन्छ । त्यसरी नेपाल आएर बसोबास गर्न थालेका भोटे नेपालीहरु हाल करिव ९० हजारको मात्र छन् ।
जसरी तराईका नेपालीहरु र सिमानाका भारतीयहरुसँग अधिकांश भाषा, धर्म र संस्कृति मेल खान्छ त्यसरी नै तिब्बत(भोट) र नेपालको हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको पनि मेल खान जानु स्वाभाविक हो । यसको प्रमुख कारण भौगोलिक र संस्कृतिक वातावरण उस्तै हुनु नै हो । साथै हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरु शेर्पा, गुरुङ लिम्बू, तामाङ, राई लगायत अन्य जातिको शारीरिक बनावट र वर्ण पनि उस्तै उस्तै देखिन्छ ।
यसरी होचो कद, नाक थेप्छे, आँखा चिम्सा र गोलो अनुहार देख्ना साथ पहाडे बाहुन क्षेत्री लगायतकाले हेपेर भोटे भनेर बोलाउन थाले ।
जब ती नै पहाडे बाहुनहरु कोरिया आइपुगे र कोरियनहरुको पनि उस्तै शारीरिक बनावट देखेर रिस उठ्ने बेलामा भोटे भनेर गाली गर्न थालेको देखिन्छ । जब कि कोरियन र भोटको सम्बन्ध कहिँ कतै नभेटेको आदिवासी अभियानकर्ताहरुको भनाई रहेको छ ।
हुदा हुँदा सामाजिक संजालमा पनि यसरी हेपाहा प्रवृति देखाउन थालेपछि कोरियामा रहेको आदिवासी जनजाति अभियानताहरुले बिरोध गर्न थालेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष युगेल टेन्डुप शेर्पाले बताए ।